Sebeswenka ngemisiko abayitape ezitolo
OMUNYE oshuthwe esedlubhe isikhindi esitatshwe kwesinye sezitolo
SEBEQALILE ukuziphihla ngemisiko eyahlukene abantu abayitape ezitolo ezinkulu zakuleli. Iningi lalezi zimpahla zokugqoka linamagama adumile kwazise bebezithatha ezitolo ezinkulu. Okwenza lezi zimpahla zabo zisheshe zigqame ukuthi zinomazibuthe basezitolo. Lo mazibuthe usuke ugade izimpahla esitolo ukuze kube lula uma zintshontshwa, likwazi ukubika i-alamu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bebetapa bejeqeza amaphoyisa namasosha, abazange besasithola isikhathi sokukhipha labo mazibuthe.
OBHASIKIDI bebenyinyitheka izingubo zokugqoka ngesikhathi abantu bezitapela ezitolo
OMUNYE oseswenke ngezingubo zakhe ezitatshwe ezitolo
Yize kunjalo akuzange kubaqede amandla, bayigqoka nawo umazibuthe imisiko yabo. Abanye sebeqalile nokusabalalisa izithombe zabo, beveza ukuthi bazoswenka ngayo injalo ngoba basebenze kanzima. Kunebhungu eliphume namateku onyawo lwesinxele womabili futhi nemibala ayifani. Ilokhu ikhale njalo ngelinombala obukeka sengathi u-pink. Lona yiwona mbala eliwuthandile leli bhungu futhi lithi liyalizwa neteku ukuthi lihleli kahle onyaweni.
OMUNYE obekune-video yakhe ezinkundleni zokuxhumana efake amateku angafani futhi onyawo olulodwa awatape kwesinye sezitolo
Ukhona nomfana obukeka eneminyaka eyishumi nangaphansi osekusabalele i-video yakhe ecosha izimpahla zokugqoka. Okudabukisa abantu ngalo mfana ukuthi uqhamuka nesijumbane sezimpahla zokugqoka sekuhlwile, ehamba nangezinyawo nesimo sasekhaya sibukeka sibhalwe ebusweni kuye. Iningi labantu liveze ukuthi nguyena kuphela obukeka eswele ngempela izimpahla zokugqoka futhi kuyabajabulisa kakhulu ukuthi uthole amateku nezimpahla zangaphansi.
Ezinye zezithombe esezivela zinakho nokungabazeka, ukuthi kukhona nasebesebenzisa leli thuba ukuhlekisa ngemisiko yabanye njengoba sekunamakhasi avulelwe lokhu.